Farxaddu ma foga …20 laga helo farxada – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Farxaddu ma foga …20 laga helo farxada
Farxaddu ma foga …20 laga helo farxada
Dadka qaar waxay fidiyaan farxadda maxaa yeelay had iyo jeer way dhoola cadeeyaan oo way madadaalo, oo waxay tuuraan dareeno xun iyo khibrado gadaashooda ah. Laakiin sidee baa hal u noqdaa iyaga oo kale?
Ka soo qaadidda dhiigga wadnaha dhammaan qaybaha jirka waxay horseedaa sirta dheecaannada loo yaqaan ‘endorphins’, hoormoonka mas’uul ka ah abuurista dareenka farxadda ee ka soo horjeedda niyadda qallafsan.
Daraasadaha sayniska ah waxay muujiyeen in jimicsigu gacan ka geysan karo yareynta calaamadaha murugada. Waana wax sahlan in la sameeyo nashaadkasta oo jir ahaaneed ha ahaato haddii ordaad, baaskiil wadid ama xitaa socod adag oo socda 20 ilaa 30 daqiiqo.
2- Sameynta yoga
Markii qofku caroodo oo kacsanaado, waa inuu xoogaa joojiyaa xoogaa daqiiqado ah, kuna tabobaro yoga jimicsi iyada oo loo marayo isku xigxiga dhaqdhaqaaqyo isaga ama iyadu ay mar ama laba jeer ku soo celin doonaan nabad iyo xasillooni.
Yoga waxay kaa caawin kartaa yareynta astaamaha niyad-jabka iyo walwalka, adoo diirada saaraya jimicsiyada neefsashada, waad ka gudbi kartaa cabsida, jahwareerka, iyo dhibaatooyinka.
3- Khudaarta cagaaran
Khudaarta cagaaran ee caleenta sida isbinaajka iyo tan kale waxay bixiyaan 33% folate, nafaqo ka caawisa in laga takhaluso niyadda xun iyo niyadjabka maxaa yeelay waxay kicisaa wax soo saarka dopamine ee maskaxda.
Hal daraasad, oo la sameeyay sanadkii 2012, ayaa lagu ogaadey in dadka da ‘dhexe ah ee cunay folate ay halis yar ugu jiraan inay yeeshaan niyad jab.
4- Daaweynta dabeecadda garashada
Daaweynta dabeecadda garashada ayaa ah daaweyn la caddeeyay oo ku saabsan foolaynta kiliinikada, jahwareerka iyo kadeedka, waxay kaloo caawin kartaa qof kasta oo si fudud ugu baahan inuu barto sida looga gudbo fikradaha xun.
CBT waxay ku tiirsan tahay caawinta bukaannada inay gartaan qaababka fikirka waxyeellada leh ka dibna dib uga noqdaan iyagoo tijaabinaya ku habboonaantooda ka dibna ku beddelaya qaab wanaagsan, oo iyaga ka dhigaya kuwo faraxsan oo caafimaad qaba, oo ka dhiga iyaga xaalad wanaagsan.
5- Iibso ubax dabiici ah
Koox baarayaal ah oo ka tirsan Jaamacadda Harvard University ayaa ogaadey in guriga lagu hayo ubaxyo dabiici ah oo cajiib ah inay muhiim tahay in laga fogaado walaaca iyo jahwareerka xun.
Natiijooyinka daraasadda ayaa muujisay in ubaxyada guryaha ku faafa naxariis badan ka qaybgalayaasha, oo laga dareemay koror ku yimaada tamarta iyo xamaasada shaqada.
6- Isku dayga dhoola cadeynta
In kasta oo qaarkood u malaynayaan in dhoola cadeyntu tahay jawaab celin dareemida farxad, cilmi baarayaashu qaar waxay ogaadaan in dhoola cadeynta ay waliba horseedi karto farxad. Iskuday dhoolla-caddeyn fudud, xitaa haddii la duuduubo, wuxuu gacan ka geystaa kobcinta xarumaha farxadda ee maskaxda, isagoo markaa wanaajinaya niyadda.
7- Daaweynta fudud
Daaweynta iftiinka waa hab wax ku ool ah oo jahwareerka xilli-xilli dhaca, waxayna khubaradu isku raacsan yihiin inay si weyn ugu shaqeyso daaweynta calaamadaha murugada aadka u daran.
Sanduuqa laydhka waxaa la ciyaari karaa 30 daqiiqo illaa saacad marka qofku niyadjabsan yahay, laakiin si loo gaaro natiijooyin waara waa in loo istcimaalo qayb ka mid ah hawl maalmeedka.
8- Dayax Madoobaadka
Haddii sanduuqa iftiinka aan la heli karin, ku beddel qorrax yar si aad u wanaajiso niyaddaada. Marka goobta shaqada ama hoyga uu ka ifaaxo, wuxuu ku siinayaa dareen farxad leh.
Aadista bannaanka iyo soo-gaadhista iftiinka qorraxda qaarkood waxay jidhka ka caawisaa soo saarista fiitamiin D, kaasoo cilmi-baaris la sameeyay uu calaamad u yahay yaraanta, niyad-jabka, welwelka iyo daalka. Dhaqanka socodka 20 ilaa 25 daqiiqo ee iftiinka qoraxda iyo gubashada aan gubaneynin ayaa si dabiici ah loola dhaqmaa dowladaha xunxun.
10- Urta liimaha
Urta citrus, sida oranjiga, liin iyo khudradda, waxay u horseedaan jawaab celin kiimikaad oo wanaagsan maskaxda aadanaha oo gacan ka geysaneysa yareynta buufiska. Kuwa doonaya inay dareemaan xasillooni waa inay ku ridaan xoogaa dhibco ah oo ah saliida looska ah ee muhiimka ah meelaha cadaadiska ee jirka. Urta ayaa sidoo kale lagu qasi karaa udgoon ubax, sida jaasmine, si loo kordhiyo saameynta wanaagsan.
laso soco 10ka danbe insha alla
Previous articleHappiness is not far … here are 20 ways
Next articleSaameynta COVID19 Aduunka iyadoo Dhimashada gaadhey 400,000